Sawirro: R/Wasaare Khayre oo la kulmay guddi culimo ah oo lacago kasoo aruuriyay Soomaalida Kenya & Uganda ku nool - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Sawirro: R/Wasaare Khayre oo la kulmay guddi culimo ah oo lacago kasoo aruuriyay Soomaalida Kenya & Uganda ku nool
November 14, 2017 at 15:45 Sawirro: R/Wasaare Khayre oo la kulmay guddi culimo ah oo lacago kasoo aruuriyay Soomaalida Kenya & Uganda ku nool2017-11-14T15:45:46+00:00 WARARKA SOOMAALIYA
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya, Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay qaar kamid ah culima’udiinka Soomaaliyeed iyo guddigii dhaqaale uruurinta ka waday dalalka Kenya iyo Uganda. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale goob-joog ka ahaayeen xubno ka mid ah Golaha Wasiiradda iyo guddiga gurmad qaran.
“Waxaan idin kaga mahadcelinayaa garab istaagiina, maadaama culimada diinta ay meel sare kaga jiraan bulshada waa in dadaalkooda ay ku biiriyaan halgankan dalka lagaga xoreynayo kooxaha nabad-diidka ah. Waa in aynu u midownaa dagaalkan oo laga wada qaybgalo, waxana muhiim ah in culimadu ay qaataan kaalintooda oo ah mid hoggaamineed.” Ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya.
“Kooxda Al Shabaab waa koox luntay oo baadi ah, kamana turjumaan micnaha, ujeedooyinka iyo sareynta diinta Islaamka, waxay bartilmaameedsanayaan dadka rayidka ah ee waxba galabsan, Dawladda Soomaaliya waxa ay dadaalkeeda ugu badan ku bixinaysaa sidii kooxdaasi looga sifayn lahaa dalka.” Ayuu hadalkiisa raaciyay Ra’iisul Wasaare Khayre.
« “Talyaanigu 15-sano ka hor ayuu ka haray Koobka Adduunka ee Hadda maaha.”.